यति मीठो स्वरकी धनी सम्झना धुरुधुरु रोईन, बाबाले दिए धोका, गिट्टी कुटेर SEE पास ! (भिडियो हेर्नुहोस)
बनमा काफल पाक्यो बाबा, गाउघरले डाक्यो । नबस्नु भो परदेश आउनु फर्केर, बा….बा ! यो गीत गाई रहदा लाग्छ यस गीतको गायिका नै उनै हुन । यति मिठो सुमधुर स्वरकी धनी उनी हुन सम्झना श्री । आफ्नो आवाजको जादु देखाउन सफल सम्झना अहिले निकै चर्चामा छिन । उनको यो आवाज सुनिसकेपछी धेरैले सहयोग गर्ने चासो देखाएका छन । उनी भने अन्तर्बार्ता मा नै आफ्नो बिगत सम्झिएर धरधरी रोइन । उनको घरमा उनी र उनको आमा मात्र हुनुहुन्छ । उनले भर्खरै मात्र SEE पास गरेकी हुन । सम्झना भन्छिन : “हाम्रो आफ्नो घर छैन हामि अरुको घरमा बस्छौ । म यता आएपछी आमा एक्लै घरमा हुनुहुन्छ । अहिले सम्म आमालाई छोडेर कहिलै हिडेको थिईन, अहिले धेरै भयो घर छोडेको त्यसैले कहिलेकाही आमा उता रुनुहुन्छ म यता रुन्छु ।”
गायिका बन्न नसके पनि सानो जागिर खाएर आमालाई जिन्दगिभर जहाँ गएपनी आफू संगै राख्ने रहर छ उनको । आधुनिक गीत मन पराउने उनी अन्जु पन्त र मेलुना राईको निकै मन पराउछिन । उनले मेलिना राईको “म भन्दानी धेरै राम्री थिए होलारत, मैले भन्दा धेरै माया दिए होला रत । मलाई छोड्ने यति ठूलो निर्णय लियौ, धोका दियौ धोका तिमी धोकेबाज भयौ ।” गीत गाएर सुनाईन ।
जन्मिएको २ महिनामै बाबाले अर्कि ल्याएर छाडे त्यसपछी सुरु भयो सम्झना र उनकी आमाको दुखका दिनहरु नेपाली समाजमा पछिल्लो यस्ता दुखका घटनाहरु प्रसस्त देखिन्छन । बढ्दै गरेको सामाजिक सन्जालको प्रयोगले धेरैकि जिन्दगी बदल्न सफल बनेको छ । यस्तै आफ्नो जीवनको यति उमेर भैसक्दा सम्म दुखले दैनिकी बिताएकी सम्झना अहिले आफ्नो जिन्दगी बदल्ने मोडमा छिन । उनले अन्तरबार्तामा गाएका गीतबाट नै उनलाई धेरैले मन पराईसकेका छन । अरु त त्यस्तै हो सबैलाई ज्ञान दिने शिक्षक यति मर्यादित र समाजको परिवर्तन गराउन सक्ने गरिमामय पेशा सम्हालेर बसेका ब्यक्तिहरुबाट पनि महिलामाथी अपहेलना हुने गर्छ भन्ने उदाहरण सम्झना श्रीको परिवारलाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ ।
सम्झना भर्खर १६ बर्षकी भईन । उनलाई कलाकार बन्ने ठूलो सपना छ ।
यहि सपना पूरा गर्न उनी सपनाको सहर काठमाडौमा छिरेकी छिन । आमालाई सानो झुपडी बनाएर राख्ने र आफू पनि त्यही झुपडीमा बस्ने उनको चाहना छ । उनको घर बाजुरा हो । उनको बुबाले आमालाई डिभोर्स दिए त्यसपछी आमाले उनलाई गिट्टी कुटेर पालेकी रहिछन । हामिले उनै सुमधुर आवाजकी धनी सम्झना संग गरेको बिशेष भिडियो कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौ । उनलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने ब्यक्तिले उनलाई सहयोग गर्दै आईरहेका राजेन्द्र पुरीलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ । सम्पर्क न. ९८५१२०३२७७ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ यस्तै आर्टिस्ट खबर मिडियाको कार्यालय, अनामनगर ९८४९९५३६५६ मा समेत सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।